Pelletizer, Mmiri mmiri n'okpuru mmiri, Pellet Machine gaa na ihe ị chọrọ
Nkọwa:Pelletizer mmiri nke dị n'okpuru mmiri,Mmiri Pelletizer nke dị n'okpuru ala,Pellet igwe,Igwe pelletizing rọba,,
Home > Ngwaahịa > Pelletizer Extrusion > N&#39;okpuru mmiri Mpụga Pelletizer
Ngwaahịa nke N'okpuru mmiri Mpụga Pelletizer , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, Pelletizer mmiri nke dị n'okpuru mmiri , Mmiri Pelletizer nke dị n'okpuru ala suppliers / factory, wholesale high-quality products of Pellet igwe R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
Ngwunye mmiri dị n'okpuru mmiri maka rọba TPU  Kpọtụrụ ugbu a
Mmiri mmiri njupụta nke mmiri dị n'okpuru mmiri maka akpụkpọ ụkwụ Soles  Kpọtụrụ ugbu a
Mmiri Prustizer nke dị n'okpuru mmiri maka mmepụta EVA  Kpọtụrụ ugbu a
N'okpuru Mmiri Extrusion Granulator maka TPR  Kpọtụrụ ugbu a
Pelletizer nke dị n'okpuru mmiri maka akụrụngwa viscosity  Kpọtụrụ ugbu a
TPE rọba n'okpuru mmiri ịgbasa mmiri  Kpọtụrụ ugbu a
Ngwunye mmiri dị n'okpuru mmiri maka rọba TPU
L INA 165 N'okpuru mmiri Extrusion mmiri Maka ihe TP / TPR / TPU elastomer na ihe plastik dabara adaba maka LINA 165 N'okpuru Mbelata Mmiri na Jụụ Mbepụ Pelletizing Line , nke kachasị ọkachamara n'usoro mmepụta nke roba plastik roba na...
Mmiri mmiri njupụta nke mmiri dị n'okpuru mmiri maka akpụkpọ ụkwụ Soles
L INA 135 N'okpuru w Atea extrusion Pelletiz ING Line Imepụta maka Eva ngwaahịa ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ plastic ngwaahịa dị ka ọbụ akpụkpọ ụkwụ, hiking akpụkpọ ụkwụ, ma ọ bụ ndị ọzọ plastic akụkụ, Lina 135 N'okpuru W Atea Cutting na Mmiri...
Mmiri Prustizer nke dị n'okpuru mmiri maka mmepụta EVA
L INA 120 N'okpuru w Atea Granulation Production Line Dabere na plastik, roba na ihe ndị ahụ nke nwere viscosity dị elu ma ọ bụ nnyapade, LINA 120 n'okpuru Machines Water n'ichepụta maka inggwakọta na pelletizing akara nke plastic ahụ na...
N'okpuru Mmiri Extrusion Granulator maka TPR
LPLA Proltizer L INA N'okpuru mmiri maka TPR LINA N'okpuru mmiri Extrusion Granulator dabara adaba maka ụdị plastik, injinịa dị elu, ihe viscosity dị elu na ihe mkpuchi igwe na - acha uhie uhie wdg. Mgbe Good Dispersion Kneading Machine ma ọ...
Pelletizer nke dị n'okpuru mmiri maka akụrụngwa viscosity
L INA 70 N'okpuru mmiri Mgbasa Mmiri Maka plastik na ihe nwere viscosity dị elu kwesịrị ekwesị maka LINA 70 Mmiri n'okpuru mmiri na ime ka mmiri dị jụụ Extruding Granulator , bụ nke na-ahụ maka ịgwakọta na pelletizing ahịrị nke urukurubụba...
TPE rọba n'okpuru mmiri ịgbasa mmiri
L INA 150 N'okpuru Prustizer Mmiri Maka plastik TPE / TPR / TPU na ihe ndị dabara adaba maka LINA 150 N'okpuru mmiri na mmiri njuputa mmịpụta Granulator , bụ nke amapụtara n'ọdịdị mmepụta nke sọks dị elu na ihe mkpuchi rọba. Usoro...
China N'okpuru mmiri Mpụga Pelletizer Ngwa
LINA Pelletizer LINA
A ga-egbutu ọtụtụ polymer ahụ wee mezie ya tupu emee ya ngwaahịa ikpeazụ. A ga-edozi ụzọ dị iche iche, roba LINA & plastic granulator nwere ike ekewa ụzọ anọ: 1. Mpepu ọkụ na usoro pelletizing ikuku. 2. Usoro mmịnye mmiri. 3. Usoro mkpocha mmiri. 4. Usoro granulation mmiri - mgbaaka. Ngwunye LINA nwere ike gboo mkpa granulation nke viscosity dị elu na obere viscosity roba na ihe plastik, yana ụfọdụ ihe ọhụrụ na mgbakwunye kemịkalụ.
LINA Mmiri mmiri na –eme ka mmiri mmiri
Igwe roba nke LINA na rọba n'ime mmiri plostizing igwe dị mma maka ihe viscosity dị elu nke nwere ike ịrapara na ngwa igwe na - agbagharị ma na-enwe mmetụta ọmịiko dị ukwuu, dịka nnukwu viscoom copolymer elastomer (EVA, TPU, TPE, TPR), elu. viscosity ọkụ gbazee nrapado na paraffin. Thisdị nke a yiri nke nwụrụ anwụ dị elu n ’ụzọ dị n’ ikpo ọkụ , ihe dị iche bụ, kama ikuku dị mma, enwere mmiri na-aga n’ihu n’elu ebu ahụ na mmiri na-emetụta kọntaktị ndị nwụrụ anwụ. Ogo nke ime ụlọ pelletizing dị mma nke na agụba nweere onwe ya ịgbagharị n'elu mmiri na-agaghị egbochi mmụba mmiri. A na-esite n ’ụnwụ anwụ amịpụta polymer a gwakọtara agwakọta, a na-ewepụta pellet ahụ n'ọnụ ụlọ ahụ site na mmiri dị oyi ka ọ banye na draịva centrifugal.
Mgbakọ eserese Ling nke LINA Mmiri Mgbatị Mmiri Mmiri
Uru nke Linea Pelletizing LineA
1. The unit nwere dum usoro usoro yinye, ụda na ọkụ ọdịda mkpu na ngwa ngwa mkpọchi mmeghe na ndị ọzọ njikwa ọrụ. A na-eji igwe anaghị agba nchara arụ ọrụ niile metụtara ihe a.
2. Ezigbo oke nke sistemụ ikpo ọkụ iji hụ na ịdị ọcha nke ihe a.
3. Ọ na-agbakwụnye ụdị dobe usoro mgbe ịkpụchasịrị usoro, iji zere agglomeration nke urughuru ma hụ na ikuku dị mma.
4. Usoro nri nke igwe na - akwagharị ahụ na - agbakwunye igwe ọkụ ma na - atụgharị ngwaọrụ iji dozie nsogbu nke ike ọkụ, okuku ihe na nhicha.
5. Karịsịa, gbọmgbọm na ịnwụ nwụrụ na-agbaso usoro ndị si mba ọzọ dị elu iji hụ ma chịkwaa ihe dị ize ndụ mere mgbe nrụgide ahụ na-enweghị nchịkwa. Mmanụ a filterụ nke mmanụ a honeyụ dị mfe ihicha ma gbanwee ngwa ngwa ngwa ngwa na isi nwụrụ anwụ dị mfe ịpụ.
6. The hoist na-etinye teknụzụ nloghachi akpaka iji hụ na arụmọrụ arụmọrụ dị.
7. Nchikota nke teknụzụ nke igwe abuo na-adọta onye na-eri nri na otu ihe ịghasa abụghị naanị imezu ihe dị elu nke agwakọta na-aga n'ihu, mana dozie nsogbu nke oge na ike iji usoro ọrụ ọdịnala.
Nkowa nke Linea Extrusion LINA
Pelletizer mmiri nke dị n'okpuru mmiri Mmiri Pelletizer nke dị n'okpuru ala Pellet igwe Igwe pelletizing rọba Pelletizer nke dị n'okpuru mmiri maka Ime Akpụkpọ ụkwụ